Instagram Akara Ókwú: Generator, Symbols, Emoji, Online Idetuo Na Mado
Akara ókwú maka Instagram
On anyị web saịtị ị ga-ahụ a ọtụtụ ndị ọhụrụ na Akara ókwú na-eji na Instagram. E nwere a dum nhọrọ nke Akara ókwú maka Instagram. E wezụga ọkọlọtọ Akara ókwú, ị nwere ike igbanye ọ bụla mara mma font maka Instagram gị nhọrọ. Ọ bụla dere na odide kere ebe a nwere ike depụtaghachiri na etinyere ọ bụla akara gị Instagram profaịlụ, n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ọ bụ aha njirimara gị ma ọ bụ ọnọdụ, profaịlụ isiokwu ma ọ bụ akụkọ, post ma ọ bụ ikwu. E wezụga, dị iche iche Akara ókwú ike ga-eji na weebụ saịtị: mata, obi ike, AKWỤKWỌ ma ọ bụ strikethrough.
Olee otú ike a mara mma font
Iji jiri ihe ọ bụla font na-anọchi anya na saịtị weebụ gị Instagram profaịlụ, ị ga-pịnye achọrọ ederede na pụrụ iche na saịtị window na họrọ ọ bụla font ị mmasị. Mgbe ahụ ị ga-enwe ike iṅomi ndị ederede ụdị mara mma akwụkwọ ozi site na saịtị. N'ihi na nke a atụmatụ ị ga-enwe ike tinye ọhụrụ Akara ókwú gị Instagram na iche chepụta gị profaịlụ. Iji anyị web saịtị i nwere ike ịgbanwe Akara ókwú na Instagram ma na profaịlụ isiokwu na gị posts ma ọ bụ na-ekwu.
Na ụwa nke oge a ị ga-mkpa pụrụ iche na akara iji mee ka gị posts pụrụ nnọọ iche mgbe ịde blọgụ na Instagram. E wezụga iche iche na ụdị ederede, ị ga-ahụ oké nso nke ihe nnọchianya dabara adaba maka Instagram. Ka ihe atụ, site na ebe a, ị ga-enwe ike idetu akọrọ akara maka Instagram aha njirimara. Ị ga-enwe ike iṅomi ọ bụla akara maka Instagram na ị ga-achọ itinye gị na profaịlụ anyị na saịtị weebụ.
Number nke akara
Iji na-eme atụmatụ gị ọdịnaya mgbe ịde blọgụ na Instagram unu mara otú ọtụtụ akara ike ga-eji mgbe na-ede ihe Instagram post, na-ejuputa na aha ma ọ bụ profaịlụ isiokwu. Ya mere, olee otú ọtụtụ akara otú Instagram post nwere?
Instagram bụ a na-elekọta mmadụ na netwọk ọzọ maka photos karịa odide; Ya mere, ndị post olu na-ejedebeghị. The ịgba bụ 2,200 akara kwa post. Na otú ọtụtụ akara ka profaịlụ isiokwu gụnyere? Ị ga-dabara ozi achọrọ na 150 akara iji tinye gị ozi na profaịlụ isiokwu. The kwuru na Instagram nwere akara ịgba nakwa: ị ga-enwe ike dee a comment mkpumkpu karịa abụọ na akara na ogologo karịa 1,000 akara.
I nwekwara ike ike dị iche iche emojis maka Instagram na web saịtị anyị. Ị nwere ike tinye emojis kere anyị web saịtị ma Instagram posts na akụkọ.
The saịtị nwekwara a ọrụ nke na-eke ọhụrụ emoticons maka Instagram. Ị nwere ike ịchọta a oké emoticon Nchikota maka profaịlụ nkọwa. Ụkpụrụ nke na-agbakwunye emoticons na post ma ọ bụ akụkọ ahụ yiri onye na-eji maka odide na emojis: na emoticon ga-ahụ kwukwara si na saịtị weebụ na pasted n'ime Instagram.
The arụmọrụ echiche nke web saịtị dabeere na e kere eke nke dị iche iche ekwekọghị iji dị iche iche Unicode akara. Ya mere nyochawa anyị web saịtị anaghị ike Akara ókwú, ma-agwakọta Unicode glyphs dakọtara na Instagram. Gịnị bụ Unicode Instagram?
All na kọmputa ọmụma na-echekwara na ọnụọgụ abụọ format (iche iche n'ịgwa nke efù na ndị). Ọbụna ederede na ị na-ugbu a, ọgụgụ na-echekwara na ihe nkesa dị ka efù na ndị. Ná mmalite nke na kọmputa na oge ọ bụla emeputa nwere ha onwe ha chere banyere ọnụọgụ abụọ koodu a mee ihe iji na-egosipụta dị iche iche ederede akara.
Na 1980s na ọnụọgụ abụọ koodu e etozu ruru Unicode. Unicode bụ mba Standardization ikike arụ ọrụ na eluigwe na ala nkọwapụta nke ederede akara.
Tupu Unicode pụtara, ọ bụla programmer eji ha onwe ha ụzọ nke na-akpakọba na-ejere ederede; Ya mere, oge ọ bụla mgbe abụọ mmemme kere dị iche iche programmers nwere na-arụkọ ọrụ, ndị «nsụgharị» a ga-kere.
N'ihi na eziokwu na ntughari ka general ọkọlọtọ e nnọọ mgbagwoju anya na ọ bụghị ihe niile ụlọ ọrụ chọrọ n'ụzọ na n'otu usoro nke ederede akara nzuzo, Unicode nwere itinye set nke dị iche iche na akara na-akwado usoro, gụnyere ochie. N'oge na-adịghị ọnụ ọgụgụ nke ndị nnọchianya na-eto na ihe exponential ọnụego, na ugbu a na ọ bụ ọtụtụ narị puku. The emoticons na-ederede akara dị ka nke ọma; Ya mere, ihe niile emoticons pụtara ụbọchị ọ bụla rue Unicode nakwa.
The mbụ 128 Unicode akara bụ ascii akara nke bụ Latin mkpụrụ akwụkwọ. Ma Unicode nwere ihe karịrị 128 na akara na ọtụtụ n'ime ha yiri Latin odide, ma nwere iche banyere akwụkwọ ozi n'atụghị egwu ma ọ bụ na ihe nakawa etu esi. Ndị a na akara ga-eji ike «pseudoalphabets» yiri nkịtị ascii ederede ma na-enwe ụfọdụ iche: ịbụ ihe obi ike, e dere Italic, nọdụ ma ọ bụ pụta ìhè!
The «Font» okwu pụtara n'ezie na set nke ndịna kwekọrọ iche iche ma ọ bụ ụfọdụ Unicode glyphs. Ị ga-nụrụ banyere ọchị Sans na Arial, nke na-Akara ókwú. The ihe N'ịbụ anyị web saịtị mgbe na-eke akụkụ, emojis ma ọ bụ emoticons, nakwa dị ka ozi na ị idetuo na mado, mgbe na-eji saịtị weebụ, ndị bụ n'ezie akara ugbu a na onye ọ bụla font. Ya mere, ederede na AKWỤKWỌ na ndị ọzọ na-esi ọtụtụ akwụkwọ ozi na ị mepụtara iji ya na gị Instagram profaịlụ bụ n'ezie iche iche akara, dị ka akwụkwọ ozi A na B, maka ihe atụ.
Ya mere, gịnị mere ndị a pụrụ iche Akara ókwú na anyị web saịtị mkpa? Ọ bụrụ na ndị nkịtị Akara ókwú na-anọchi anya ebe a, ị ga-enwe ike idetuo na mado ha! Ihe atụ, ị ga-enwe ike itinye okwu ụfọdụ na-atọ ọchị Sans n'ime gị Instagram bio, n'ihi na akara na ị idetuo ga-nkịtị ascii na akara na ga na-na ụfọdụ saịtị dị ka akọwapụtara site na saịtị nwe.
Otú ọ dị, mgbe na-eji set of Unicode nnọchianya nke anya dị ka ụfọdụ font ma ọ bụ nke ụfọdụ style (obi ike, AKWỤKWỌ, mata ma ọ bụ nọdụ, ihe atụ), anyị ga-enwe ike iji akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị na-«Ṅomie» a mara mma font na profaịlụ n'isi ma ọ bụ na gị Instagram posts.